Maamulka Mandhera: “Aad ayey noogu adkaatay inaan laba mid kala doorano” | Xaysimo
Home War Maamulka Mandhera: “Aad ayey noogu adkaatay inaan laba mid kala doorano”
Maamulka Mandhera: “Aad ayey noogu adkaatay inaan laba mid kala doorano”
Maamulka Mandhera ayaa bayaan kasoo saaray kulan ay maanta ka yeesheen xaaladda amni ee magaalada kadib dagaalkii Isniintii ka dhacay degmada Beled Xaawo, oo saameyn xoogan ku yeeshay magaaladaas.
Maamulka ayaa sheegay in Jubaland iyo dowladda Soomaaliya ay ciidamo kusoo kala ururinayaan Mandhera iyo Beled Xaawo oo ah halka ay kala joogaan.
“Xaaladdan waxay abuurtay argagax iyo barakac xooggan oo ka jira xaafadaha Bulla Customs, Bulla Garay, Bulla Mpya, Bulla Arabia, Bulla Busle iyo Border Point 1 oo ka wada tirsan Mandhera,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Maamulka Mandhera waxay sheegeen inay dhexda u galeen loolan diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya, kaasi oo saameyn amni oo xooggan ku yeesha magaalada Mandhera.
“Aad ayey noogu adkaatay inaan kala doorano taageeridda mowqifka dowladdeena, iyo dhibka haysta shacabka magaaladeena oo ah kuwa dagaalka uu saameynayo, taasi oo wax aan macquul ahayn ka dhigtay inaan ka aamusno dhibaatada shacabkaa” ayaa lagu yiri qoraalka.
Maamulka ayaa sheegay ka aamuska dowladda dhexe ee Kenya ee xaaladdan ay hogaamiyayaasha Waqooyi Bari ku qasabtay inay xal u raadiyaan xaalad awoodahooda ka baxsan, taasi oo aad ay u dhibsanayaan.
“Waxaanu ka codsaneynaa dowladda dhexe inay dejiso xiisadda, islamarkaana u xaqiijiso shacabka ammaankooda iyo badbaadadooda, si aysan u lumin kaloosnidii lagu qabay,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Ma ogolaaneyno in danaha dhinacyo shisheeye laga hormariyo tan shacabkeena. Waxaan sidaas darteed ka dalbaneynaa dowladdeena inay ceyriso ciidamada shisheeye ee ku sugan Mandhera, sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Qoraalka ayaa ugu dambeyn ugu baaqay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu si deg deg ah gacan uga gaysto xaaladda, uuna damaanad qaado badbaadada shacabka.